अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र काम गर्ने तौरतरिकाको प्रतिरोध नै हो : गजुरेल | khaltinews.com
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र काम गर्ने तौरतरिकाको प्रतिरोध नै हो : गजुरेल
एकताको मर्म, भावनाअनुरूप पार्टी सञ्चालन हुन नसकेको र त्यसको असर सरकारको कामकारवाहीमा पनि परेको भन्दै पार्टीलाई विधि, पद्धतिसम्मत ढङ्गले चलाउन ढिला भइसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलको तर्क छ । पार्टी सचिवालयको बैठक पटक–पटक बस्ने तर समाधान नदिएको भन्दै उनले ९ सदस्यीय ‘हेडक्वाटर’को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । एकीकरण प्रक्रिया लम्बेतान बन्दै जाँदा पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढेको त्यसले नयाँ–नयाँ अन्तरविरोध खडा गरेको पनि गजुरेलको बुझाइ छ । नेकपाभित्र देखिएको पछिल्लो संकट, समस्याग्रस्त एकीकरण प्रक्रिया र सरकारको कामकार्यवाहीका विषयमा गजुरेलसँगको कुराकानीः
पार्टी एकता नै असहज अवस्थामा भयो । एमाले र माओवादी पार्टीबीचको एकता सहज एकता होइन । संविधान निर्माणपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच साझेदारीकै सरकार थियो । माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यसबखत बजेट पारित भएपछि ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मौखिक सहमति, समझदारी थियो । प्रचण्डले लिखित नै सहमति गरौँ भन्नुभएको थियो । तर, ओलीले ‘लिखित किन गर्नु, दुई पार्टीबीच यति पनि विश्वास छैन र’ भन्दै आश्वस्त तुल्याउनुभयो । तर, सहमतिअनुरूप ओली सत्ता छाड्न तयार हुनुभएन । गठबन्धन टुट्यो । नयाँ समीकरण बन्यो ।
एमाले–माओवादी केन्द्र संविधान निर्माण र नाकाबन्दीका बेला दह्रोसँग उभिए । तर, जब पद र प्रतिष्ठा अगाडि आयो । कित्ताबन्दी भयो । आ–आफ्नो बाटो लागे । त्यसले असाध्यै अविश्वासको अवस्था पैदा गरेको थियो । मञ्चमा जुहारी चल्ने र एकले अर्कालाई उछित्तो काढ्ने क्रम चल्यो । संविधान निर्माण गर्नेबेलामा पनि, संविधान जारी भएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री, सुशील कोइराला राष्ट्रपति हुने । माओवादी केन्द्रलाई केही चाहिँदैन भनेर प्रचण्डले भन्नुभएकै हो । तर, परिस्थिति तदनुरूप बनेन । केही समय एमालेसँग सहकार्य भयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा अलगअलग हिँड्यौँ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्यौँ । त्यतिबेला दुवै पार्टीमा समस्या थिए । माओवादी केन्द्रभित्र चार हजारको केन्द्रीय कमिटी थियो । चार हजारको केन्द्रीय समिति हुनु भनेको एक प्रकारको विघटन नै हो । त्यसको अर्को अर्थ लाग्दैन । एमालेभित्र पनि गुटबन्दी चर्को थियो । पार्टीभित्र विभिन्न गुट–उपगुटले हाँगा हाल्नु भनेको पनि पार्टी विघटनकै अवस्था हो ।
दुवै नेतृत्वले बुझे होला– अब पार्टीलाई अलग–अलग हिसाबले चलाएर लैजान सकिँदैन । तत्कालका लागि त अलग–अलग जान पनि सकिन्थ्यो होला । तर, सत्ताचाहिँ सीधै कांग्रेसको हातमा पुग्थ्यो । विभाजित भएर लड्दा जनमत वामपन्थीको हुने सत्ता कांग्रेसको हुने अवस्था हाम्रो आँखा सामुन्ने थियो । जनताको चाहना त्यस्तो होइन ।
जनताको चाहना त स्थिर सरकार र वामपन्थी पार्टीको एकता नै हो । अतः पार्टीभित्र विभिन्न रूप र आवरणमा पैदा भइरहेका संकट र जनचाहनाको बलमा पार्टी एकता भयो । गल्ती कहाँनेर भयो भन्दा नेताहरूले परिस्थितिको ठीकठीक आँकलन गर्न सक्नुभएन । जनताले नै अनुमोदन गरेकाले एकता वस्तुवादी थियो । तर, एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउँदाचाहिँ आदर्शवादी कुरा गर्नुभयो । स्थिति र परिवेश तदनुकूल नहुने तर जिम्मेवारी बाँडफाँटमा ‘आदर्श’ अघि सार्नुभयो । दोहोरो जिम्मेवारी नलिने । सरकारको भूमिकामा रहेकालाई पार्टीको भूमिकामा नदिनेजस्ता आदर्शलाई जिम्मेवारी बाँडफाँडमा मापदण्ड बनाउनु भयो ।
कुरा त राम्रो हो । तर, पार्टी नेताले सोचेकै ट्र्याकमा कहाँ अघि बढ्थ्यो र ! उदाहरणका लागि जिल्ला र अध्यक्ष र इन्चार्जका लागि जे मापदण्ड अघि सार्यौँ, त्यो एक वर्षअघि नै गरेको भए के हुन्थ्यो ? तर उहाँहरू आदर्शवादी, मनोगतवादी भइदिनुभयो । परिणाम एकवर्ष त्यसै अलमलिएर बस्नुपर्यो । यसमा नेतृत्व र सचिवालयको असक्षमता देखियो नि ! यसलाई असक्षमताका बाहेक केही भन्न सकिँदैन ।
त्यसले प्रचण्डको मनमा चिसो पस्नु स्वभाविकै भयो । सरकारका निर्णय प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एकल ढङ्गले अघि बढाउने । सरकारका काम–कारबाहीमा सरसल्लाह नगर्ने । यसबीचमा सरकारले कयौँ निर्णय गरेका छन् । नियुक्ति दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयताको, संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी अधिकारको केन्द्रीकरण गर्दै जानुभएको छ । धेरै कार्यालय आफूमातहत ल्याउनुभएको छ । पार्टीभित्र विशेषतः अध्यक्ष प्रचण्डसँग कहाँ सल्लाह भएको छ त ? त्यसले विश्वासमाथि सङ्कट पैदा गर्ने नै भयो । अध्यक्ष प्रचण्डले यसैको प्रतिरोध गर्नुभएको हो । सबैलाई थाहा छ, अढाइ–अढाइ वर्ष सरकार चलाउने सहमति भएको छ । अढाइ वर्ष त पुगेको छैन । यसर्थ यो प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र काम गर्ने तौरतरिकाको प्रतिरोध नै हो ।
सचिवालयले पास गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन एकवर्षसम्म अड्काइयो । प्रचण्डले धेरैपटक ‘अब त छापौँ’ भन्नुभयो तर ओली तयार हुनुभएन । रोकिँदै आयो । त्यहीबीचमा विचारसम्बन्धी नयाँ बहस चल्यो । सहमति भइसकेको विषयमा बहसमा पो ल्याइयो । त्यसले एकअर्काप्रति आशंका पैदा गरेको हो । स्कुल विभागको कुरा मात्र होइन, पार्टीको वैचारिक लाइनको कुरा पनि हो । पार्टीको स्कुल विभाग लिएपछि पार्टीको वैचारिक लाइन बोकेर तलतल जाने कुरा भयो ।
अहिले रिभर्स (उल्टो) देखिन्छ । अध्यक्षद्वयले हल गर्न नसकेपछि तलतिर फर्काइन्छ । त्यसले झन् परिणाम दिएको छैन । अध्यक्षद्वयले टुंग्याउन नसकेपछि सचिवालयले विवाद समाधान गर्न सक्नुपथ्र्यो, सानै टीम छ । सचिवालय पनि अयोग्य सावित भएको हो ? सचिवालय आफ्नो भूमिका पूरा गर्न असमर्थ नै रह्यो ।
त्यही त, कि स्थायी कमिटी खारेज गरे भयो, कि सचिवालय विस्तार गरेर एउटै बनाए भयो । पूर्वमाओवादीको थियो नि, एकता केन्द्रसँग एकता गर्नुपूर्व । त्यस्तै सचिवालय बनाए पनि त भयो । त्यतिबेला सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी थियो । तर, नेकपाको त एउटा लेयर (तह) नै बढी छ । हाम्रो पार्टी प्रणालीमा स्थायी कमिटी नै सर्वेसर्वा हो । र त, स्ट्याण्डिङ कमिटी भनेको । जतिबेलै बैठक बस्न सक्ने, निर्णय लिन सक्ने । यस्तो स्थायी कमिटी हुँदा हुँदै एक र्याङ्क माथि हुनमात्रै सचिवालय किन चाहियो ? वास्तवमा भन्ने हो भने स्थायी कमिटीभन्दा हामी एक तह माथि हौँ भन्ने आत्मतुष्टिमात्रै हो, सचिवालय ।
पार्टी एकता नटुङ्गिँदै पार्टीमा समीकरण बनाउन खोजिँदैछ । नेताहरूका बीचमा तानातान छ, त्यो घातक छ । पार्टीभित्र पछिल्लो समय जुन अन्तरविरोध पैदा भएको छ त्यसको समाधान कमिटीका बैठक राखेर होइन समीकरण बनाएर हल गर्न खोजिँदैछ । केपी ओली र प्रचण्ड एकतावद्ध नभइकन समस्या समाधान हुँदैन । एउटा नेतालाई च्याप्छु, अर्कोलाई पाखा लगाउँछु भनेर सोच्न थालियो भने त्सले अनिष्टमात्रै निम्त्याउँछ ।
रात रह्यो, अग्राख पलाउँदै आयो । एकताका थाती रहेका काम नसक्नुको परिणाम हो यो । एकता नसक्दा पार्टीभित्र विभिन्न अन्तरविरोध देखिन थाले । त्यसले सैद्धान्तिक आवरण लियो । यो कुनै मतभेद होइन, फगत ‘बार्गेनिङ’ हो । जबजलाई देखाउने तर अरू नै कुरा लिने गरी यसको कुरा उठान गरियोजस्तो लाग्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो । संगठन बलियो भएन भने सरकारले जति नै काम गरे पनि प्रभावकारी हुँदैन, स्वतः । एकातिर संगठन नहुँदा पार्टीका कामको सञ्चार हुन सकेको छैन । अर्कोतिर सहयोग र सुझाव दिने ठाउँ पनि छैन । अहिले कुनै कमिटी चलायमान छैनन् । त्यसले सरकारले गरेका राम्रा काम जनताको बीचमा लैजान सकिएको छैन । अर्कोतिर खबरदारी गर्ने ठाउँ पनि छैन । पार्टीका असन्तुष्टि मिडियामार्फत पोख्न परिराखेको छ । खबरदारी गर्ने ठाउँ सञ्चारमाध्यम पो भएको छ । अर्को, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो । तर, सरकारले पार्टी चलाउनेतिर गइयो ।
२०५१ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकार पार्टी कमिटीका कारण लोकप्रिय भयो । अहिले सरकारले पार्टी चलाउन थालेपछि पाइला–पाइलामा आलोचना बेहोरिरहनुपरेको छ । सरकार र पार्टीको कामको ओभरल्यापिङ, ओभरलोड छ । त्यसलाई पन्छाउन कम्तीमा कार्यविभाजन गरेर सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने, पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्ने भनेको भए सन्तुलन र नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो । दुवैले एकले अर्काको खबरदारी पर्ने गर्थे । अहिले पनि धेरै बिग्रिइहालेको छैन । पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्ने, सहायक नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने, सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने, सहायक नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्ने गरी मिलाएर लैजान सकिन्छ ।
मन्त्रीको समस्या हो कि ? प्रधानमन्त्रीलगायत टीमकै समस्या हो कि ? पार्टीको समस्या हो कि ? रोगको ‘डायग्नोसिस’ (निदान) नै हुन सकेको छैन । रोग नै पहिचान नै नभइ, नगरी कसलाई दोष दिने ? अहिले कुन मन्त्रीलाई काम गरिनस् भने हटाउने, उसको भूमिका त प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छ । पार्टीसँग जोडिन्छ । पार्टीसँग जोडिएर काम गर्न नपाएपछि मन्त्रीहरू कसरी सफल हुन्छन् ? पार्टीसँग जोडिएर काम गरेन सरकार सफल हुन्छ । भ्रम निवारण गर्न सहज हुन्छ । कामको लय पनि मिल्छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि एउटा संयन्त्र बनाइदिएको भए प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कत्ति सहज हुन्थ्यो ? तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत सम्मिलित संयन्त्र बनाएर सरकारको कामको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो । एकातिर त्यसले सरकारलाई सल्लाह–सुझाव दिन्थ्यो, अर्कोतिर सरकारका निर्णयको अपनत्वबोध पनि हुन्थ्यो । हरेक मन्त्रालयमा त्यस्तै संयन्त्र गठन गर्न सकिन्थ्यो । पार्टीका नेता–कार्यकताले मन्त्री हुने चाहना पनि राख्दै हिँड्दैनथे । मन्त्रीहरूलाई सघाउ पनि पुग्थ्यो । सरकार सञ्चालनमा सबैको सहभागिता पनि देखिन्थ्यो । तर, हामीले मिलाउन सकेनौँ । हाम्रै अयोग्यताको कुरा हो यो ।
अब पार्टीभित्र नयाँ बहसको जरुरी छ । अघि नै भनेँ, एकताका आधार खज्मजिए । पार्टीभित्र अविश्वास बढ्दै गयो । शङ्का–उपशङ्का विभिन्न रूपमा प्रकट हुन थाले । ‘रेक्टोफिटिङ’का लागि पनि बहस त आवश्यक छ नै । सत्ता हस्तान्तरणका सबालमा हिजो जे सहमति भएको छ त्यही अनुरूप हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डले भनिसक्नुभएको छ ।
यही सरकारको काम प्रभावकारी भयो, ठीक ढंगले कार्यविभाजन भएर पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याको समाधान भए भने सरकार केपी ओलीले नै चलाउँदा फरक पर्दैन । प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, तेस्रोपटकका लागि उहाँले रहर गर्नुहुन्न । होइन, पार्टीभित्रका समस्या ज्युँ का त्युँ रहे, चिज बिग्रँदै गए भने सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुबाहेक के विकल्प रहन्छ र ?
यसमा मेरो व्यक्तिगत बुझाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने, सरकारले काम गरिरहेको छ । हुन त प्रधानमन्त्रीलाई यो हरिबोलले सरकारको कति खोइरो खनेको ? कति विरोध गरेको भन्ने पनि लागेको होला ! तर, मेरो कुरा त्यस्तो होइन । हामीले हिजो जेजे भन्यौ, त्यो जनताले दिए । त्यसअनुसारको काम हामीले देखाउन सकेनौँ । जनताले खोजेका छन् नयाँ, नवीन । रातारात विकास हुन्छ भनेर उनीहरूले पनि ठानेका छैनन् । सरकारका अफिसमा जाँदा मन्त्री, सचिव, प्रशासकहरूको प्रस्तुति फरक होस्, सरकार सञ्चालनको तौरतरिका फरक होस् । संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप होस् । तर, तदनुरूप छैन ।
संविधानमै समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनेर लेखेका छौँ । संविधानमै समाजवादउन्मुख राज्य–व्यवस्था भनेर लेखेपछि सरकार र प्रतिपक्षबीचका सम्बन्ध हिजोकै आखाँबाट हेर्नुभएन । नयाँ ढङ्गले परिभाषित हुनुपर्यो । तीन तहका सरकार सोही ढंगले चल्नुपर्यो । नेताहरूका बोलीचाली, शैली बदलिनुपर्यो । हरेक ठाउँमा नयाँपन झल्कनुपर्यो । अहिले त यहाँ संविधानबाहेक केही बदलिएको छैन । नेतादेखि प्रशासकसम्मको चिन्तन, व्यवहारमा केही बदलाव आएको छैन । हामीले राम्रो सर्वगुणसम्पन्न संविधान बनाएका छौँ भने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि त्यही अनुसारको आचरण चाहियो ।
सहकार्यको संस्कृतिलाई बढाएर लैजानुपर्यो । पार्टीभित्रै सहकार्य छैन । राम्रो कामको थालनीको अर्को नाम हो समाजवाद । सरकारले थालेको राम्रो कामलाई प्रतिपक्षले पनि साथ दिनुपर्यो । प्रतिपक्षले उठाएका राम्रा कुरा सत्तापक्षले पनि ग्रहण गर्नुपर्यो । यसो हुन नसक्दा जनतालाई चित्त बुझिरहेको छैन । हामीले विगतका सरकारको काम हेर्दै पनि आएका छौँ । भोग्दै पनि आएका छौँ । तर, यो सरकारले ती सरकारको तुलनामा उल्लेख्य काम गरेको छ । तर, जनता असन्तुष्ट नै छन् । तीन तहकै सरकारको काम गर्ने तरिका उही छ । भनसुन चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता व्याप्त छ । हामीले खोजेको परिवर्तन यही हो त ? परिवर्तन कागजको खोस्टा हो ? कि हामीले कागजमामात्र परिवर्तन ल्याउन हौँ ? मैले भन्ने गरेको छ– नयाँ प्रणालीको गाडी आएपछि चालकले आफूलाई अद्यावधिक, अपग्रेड गर्नुपर्छ । अद्यावधिक गर्न नसकेर पुरानै ढाँचाबाट चलाइयो भने दुर्घटनामा परिन्छ ।
अहिले भएको यही हो । अघिल्ला सरकारका तुलनामा यो सरकारले राम्रो नीति, कार्यक्रम बजेट ल्याएको छ । तथापि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेको छैन । सबैतिर बराबर ऊर्जा लगाएर विकास हासिल गर्न सकिँदैन । समृद्धि त टाढाको कुरा । अर्कोतिर हामीसँग विकासको मोडल पनि छैन । हिजो कसैले सिंगापुर बनाउँछ, कसैले स्वीटजरल्याण्ड, कसैले एसियाली मापदण्डमा पुर्याउँछु भन्यो । वास्तवमा ती हाम्रो विकासको मोडल थिएनन् । हामीलाई त हाम्रो माटो सुहाउँदो, नेपाली विशेषता, विविधतासहितको विकासको मोडल चाहियो । आफ्नो विशेषता, मौलिकता समातेर पो विकास हुन्छ, अर्काको नक्कल गरेर विकास हुँदैन ।
हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्र अनेक छन् । जल, जंगल, कृषि, वन, पर्यावरण, तीर्थस्थल छन् । मैले शुरूदेखि नै भन्दै आएको छु हाम्रो विकासको नमुना ठीक भएन । डाँडा–पाखा, वन–जंगल नासेर डोजर लगिएको छ । विकास भनेको बाटो नै हो भन्ने बुझिएको छ । यसले विकास गरेको छैन । बरु सर्वनास गरिरहेछ । प्राकृतिक प्रकोप, विपत्तिको निम्तो दिएको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न माग अनुसारमात्रै बाटो पुर्याउन सकिन्छ । जस्तो कृषि मन्त्रालयले माग गर्छ– फलानो ठाउँमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बाटो चाहियो । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले माग गर्छ– फलानो पावर हाउस बनाउन सडक चाहियो ।
त्यस्तै अरू मन्त्रालयले माग्छन् । केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग र लिङ्क रोडका बारेमा सोच्छ । अहिले त वडादेखि केन्द्र सरकारको काम के त भन्दा बाटो बनाउने ! यसर्थ, सरकारले कुनै नवीन कामको सूत्रपात गर्न सकेको छैन । पञ्चायतको निरन्तरता बहुदलपछिको सरकारले दियो । अहिलेको सरकार त्यही बहुदलको निरन्तरताजस्तो छ । जनताले पुरानै सरकारको निरन्तरता होइन नयाँपन खोजिरहेका छन् ।
हामी मौन छैनौँ । स्थायी कमिटी, संसदीय दलको बैठकमा मैले प्रष्ट ढंगले कुरा राख्दै आएको छु । मैले परिस्थितिको विश्लेषणसहित समाधानको उपायसमेत दिएको छु । केही समय चुप लागेको पनि हो । अब पनि चुप लाग्नु हुँदैन । डुब्न आँटियो । डुब्दा यो सरकार, केपी ओली प्रचण्डमात्रै होइन, पार्टी, आन्दोलन सबै एकैमोठमा डुब्छ । डुङ्गा ठीकै ढंगले चल्दासम्म ढुक्क हुन सकिन्छ । ढलपलाउन थालेपछि खबरदारी गर्नुपर्छ ।
कोरोना भ्याक्सिन लगाएपछि ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु सामान्य हो (भिडियो सहित)
कोट नलगाए पनि न्यायको लागि लडिरहेको छु: सृष्टि केसी
साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति जारी हुन्छ: गभर्नर अधिकारी (अन्तरवार्ता)